chandrakanta khanal(chandrakanta khanal) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । प्रदेश नम्बर पाँचको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेश सभामा पेश भएको छ । आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता...
बुटवललाई टिप्परमुक्त शहर बनाइने !
रुपन्देही । प्रदेश नंं ५ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बुटवललाई टिप्परमुक्त शहर बनाईने बताएका छन् । बजारको मध्यभागबाटै निर्वाध रुपमा संचालन हुने टिप्परका कारण दिनहुं दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले पाल्पाका विभिन्न खानी क्षेत्रबाट आउने टिप्परहरुलाई वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरी बजारको सडकलाई...
सरकारले भुक्तानी नदिएपछि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम रोकियो
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । रूपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम आइतबारदेखि रोकिएको छ । सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पठाउन ढिलाई भएपछि मुख्य काम नै ठप्प भएको हो । अहिले विमानस्थलको मुख्य काम, धावनमार्गको पिचको काम चलिरहेको थियो । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबाट भुक्तानी...
ओलीलाई कालोझण्डा देखाउँदा १० दिन गैरकानूनी थुनामा परे यी युवा !
रुपन्देही । बुटवलको जितगढीमा बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने रुप्रसाद घिमिरे रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले घिमिरेलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी गरेपछि उनी रिहा भएका हुन् । उनलाई इलाका...
आशिर्वाद पेन्ट्सद्वारा दुईगुणाले लगानी थप, ३ नयाँ प्रडक्ट बजारमा
रुपन्देही । नेपालगञ्जबाट उत्पादन हुने आशिर्वाद पेन्टस् प्रालिले आइतबारदेखि थप ३ वटा नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिस्तरको मापदण्डअनुसार अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको वातावरणमैत्री ती ३ उत्पादनलाई एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष...
पूर्वराजाको बनाएको सोल्टी होटल ओलीद्वारा उद्घाटन, मौसम बिग्रिएपछि ब्यारेकमा बास
रुपन्देही । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढिसकेको बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालगञ्जको राँझा नजिकै सञ्चालन गरेको होटल सोल्टीको औपचारिक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई समृद्ध बनाएरै छाड्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न होटल...
बुटवलमा फसल धितो राखेर ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी, सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । बुटवल उप–महानगरपालिकाले सुरु गरेको धान धितो राखी कृषकहरुलाई ऋण लगानी गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । किसानहरुले यो कार्यक्रमबाट लाभ मिलेको बताउँदै निरन्तरता दिन आग्रह पनि गरेका छन् । बाली लगाउँदा लागेको ऋण तिर्न एवं घरायसी खर्चका लागि अति न्यून मूल्यमा खलोबाटै धान बिक्री गर्न बाध्य किसानहरु...
प्रदेश ५ मा क्रसरको बितण्डा: जंगलको छेउ र खोलाको बीचैमा उद्योग
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका विभिन्न क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन् गरेको समाचार आएपछि सरकारले निगरानी बढाएको हो । एकातिर नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउने र अर्कोतिर रातारात बन्द गरिएका खोलाहरुमा उत्खनन्...
हावाहुरीपीडितलाई प्रदेश ५ को सरकारले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने
रुपन्देही । प्रदेश नं ५ सरकारले २ नम्बर प्रदेशका बारा र पर्सा जिल्लाका हावाहुरीपीडितलाई १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । हावाहुरीबाट घाइते तथा घरबिहीन बनेकाहरुका लागि प्रदेश नं ५ को सरकारले एक करोड रुपैयाँ राहतस्वरूप प्रदान गर्ने निणर्य आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पू्र्वाधारमन्त्री बैजनाथ...
लुम्विनी भ्रमण वर्षमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम शाइन रेसुङ्गा बैंकले गर्ने
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले संघीय सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० र प्रदेश नम्वर ५ को सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुर्याउन पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने भएको छ । बैंकले दुबै सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षलाई वित्तीय...
प्रदेश ५ मा पनि एनआइसी एशिया आक्रामक: ५१ शाखाबाट १३ अर्ब निक्षेप संकलन
रुपन्देही । एनआईसी एशिया बैंक स्थापनाको २२ वर्ष पुग्न लागेको अवसर पारेर बुटवलमा उच्च ब्याजदरका निक्षेप योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश नम्बर ५ का १२ वटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकका शाखाहरु रहेका छन् । बैंकका प्रदेश ५ कार्यालय प्रमुख तिलकसुन्दर कार्कीले हाल ५१ वटा शाखाहरु १२ वटा जिल्लामा सञ्चालन गर्न सफल...
विप्लवको पार्टी कार्यालयमा प्रहरीको डोजर !
रुपन्देही । नेकपाको बुटवलस्थित कार्यालय भवन प्रहरीले डोजर लगाई भत्काएको छ । विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि बुटवल पाल्पारोडस्थित रातो घरमा रहेको भवन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले डोजर लगाएर शुक्रवार भवन भत्काएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उक्त भवन १३ वर्षअघि तत्कालीन...
रुपन्देहीमा ९ करोड लगानीमा प्लाष्टिक टंकी उद्योग
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा ९ करोड लगानीमा प्लाष्टिक टंकी उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । रेसुङ्गा पोलिमर्स प्रालिले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ६ गणेशपुरमा उद्योग सञ्चालन गरी गत व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । पाँचजना पारिवारिक सदस्यहरुको संयुक्त लगानीमा उपभोक्ताको मागका आधारमा जर्मन टेक्नोलोजीमा आधारित...
रुपन्देही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल अन्तरर्गतका जिल्लाहरुमा उजुरी परेको तुलनामा निकै कम मुद्दाहरु मात्र फछ्र्यौट हुने गरेको देखिएको छ । अख्तियारको बुटवल कार्यालयमा १ हजार भन्दा बढी उजुरी परेकोमा ४ सय ९२ उजुरीको मात्र फछ्र्यौट भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार बुटवलमा गरेको अन्तरक्रियामा...
स्थानीय सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन–‘गिट्टीबालुवा नरोक्नुहोस्’
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ देखि २०८० सम्म सडकयुग र ८५ सालदेखि सुरुङ मार्गको युग हुने बताएका छन्। बुटवलमा शुक्रबार बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक स्तरोन्नति कार्यको शिलान्यासपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा विकासको युग सुरु भएकाले विपक्षीहरुले...